हाम्रो गृह पृष्ठ क्लिकहरूको २०% भन्दा बढी एक सुविधाबाट आउँछ Martech Zone
हाम्रो गृह पृष्ठ क्लिकहरूको २०% भन्दा बढी एक सुविधाबाट आउँदछ
हामीले होटजरका लागि साईन अप गर्यौं र केहि गर्‍यौं हीटम्याप परीक्षण हाम्रो गृह पृष्ठमा। यो धेरै वर्ग, तत्व, र जानकारीको साथ एक धेरै व्यापक होम पेज हो। हाम्रो लक्ष्य मानिसहरूलाई भ्रमित गर्नु होइन - यो एक संगठित पृष्ठ प्रदान गर्नु हो जहाँ आगन्तुकहरूले उनीहरूले खोजिरहेका सबै भेट्टाउन सक्दछन्।
तर तिनीहरूले फेला पारेनन्!
हामी कसरी जान्दछौं? हाम्रो गृह पृष्ठहरूमा सबै सment्लग्नताको २०% हाम्रो आउँछ खोजी पट्टी। र हाम्रो पृष्ठको बाँकी समीक्षामा, आगन्तुकहरू विरलै स्क्रोल गर्दछन् र हाम्रो पृष्ठ तल अन्तर्क्रिया गर्दछन्। अपवाद यो हो कि धेरै दर्शकहरू हाम्रो फुटरमा जान्छन्।
हामीले लागू गरेका छौं स्विफ्टप्रकार हाम्रो आन्तरिक खोज सेवा को लागी। यो एक मजबूत autosuggest संयन्त्र, उत्तम रिपोर्टिंग प्रदान गर्दछ, र हामी संग एक टन अधिक सुविधाहरू छन् जुन हामी यसको साथ साइटमा लागू गर्न सक्छौं।
तपाईंको साइट कत्ति राम्रोसँग राखिएको छ, तपाईंको नेविगेशन कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, पर्यटकहरूले उनीहरूको आफ्नै अनुभवमा नियन्त्रण राख्न चाहन्छन् र मलाई चाहिएको चीजको लागि उत्तम आन्तरिक खोज संयन्त्र चाहान्छन्। जब हामी नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने कम्पनीहरूसँग काम गर्छौं, एक बलियो र सहज खोज मेकानिजम हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईं एक प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने सेवाको रूपमा खोजी गर्नुहोस् उपकरण, कार्यान्वयन गर्न निश्चित हुनुहोस् तपाईको एनालिटिक्समा आन्तरिक खोजी ट्र्याकिंग। समयको साथ, तपाईंले शीर्षकहरूमा केहि शानदार जानकारी पनि खिच्नुहुनेछ जुन तपाईंको आगन्तुकहरूले खोजिरहेका छन् जुन तपाईंले सामग्री उत्पादन गर्नुभएको छैन।
टैग: क्लिक विश्लेषणहीटम्यापघर पृष्ठगृह पृष्ठ लेआउटहटजरआन्तरिक खोजीसेवाको रूपमा खोजी गर्नुहोस्मार्केटिंग खोज्नुहोस्swiftype
फ्रिफ मार्केटको शपिंग कार्ट चमकदार ईन्टेकि। छ
मार्क्स 19, 2016 मा 4: 50 PM
त्यो सत्य हो। डिजाइनरका लागि ग्राहकहरूको लिंकहरूको लागि जति धेरै सम्भव भए आकर्षक देखाउन यो उत्तम हुन्छ। सधैं ग्राहकहरू www वेबसाइटको "बेस्ट-टु-कम्पनी" अंशका लागि क्लिक गर्दैनन्।